कुवेत पुगेकी नेपाली चेलीको दुःखद निधन
- नेपाली सन्देश शुक्रबार, अशोज १२, २०७५ , 25.3K जनाले हेर्नुभयो
कुवेत, असोज । कुवेतमा एक नेपाली महिलाको निधन भएको छ । बेलवारी ५ मोरङकी अन्दाजी ३९ वर्षीया फूलमाया बिकको मंगलवार बिहान जिलिवमा करेन्ट लागेर निधन भएको जनाइएको छ ।
घरेलु कामदारको रुपमा करिव ७ महिना पहिले कुवेत आएकी फूलमाया आइतवार मात्र स्पोन्सरको घरबाट भागेर इलिगल भई जिलिव पुगेर कामको खोजीमा बसेको जनाइएको छ ।
फूलमायाको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जनाइए पनि आफै लगाएको वा लागेको भन्नेबारे केही खुलेको छैन । दूतावास कुवेतमा प्रथम सचिव तथा सूचना अधीकारी भोगेन्द्र लिङ्देनका अनुसार मृतकको परिवार सम्पर्कमा आइसकेको र जतिसक्दो चाँडो शव नेपाल पठाउने तयारी रहेको छ ।
साउदी अरबमा काम गर्न जाने नेपालीको न्यूनतम ज्याला बढेको छ । अब साउदी जाने नेपाली कामदारले मासिक न्यूनतम ज्याला न्यूनतम १००० रियाल (३० हजार रुपैयाँ) र खाना भत्ता ३०० रियाल (९ हजार रुपैयाँ) पाउने छन् । त्यस्तै अधिकतम ज्याला ११००० रियाल (३ लाख ३० हजार रुपैयाँ) र खानाभत्ता ५०० रियाल (१५ हजार रुपैयाँ) पाउनेछन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा सरकारले न्यूनतम ज्याला बढाएर प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसअघि न्यूनतम ज्याला ८०० रियाल र खाना भत्ता २०० रियाल रहेको थियो। साथै साउदी जाने कामदारको औषधि उपचार, आवास, यातायात, हवाई टिकट रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सरकारको यो निर्णयपछि साउदी जाने अदक्ष नेपाली कामदार समेत लाभान्वित हुने छन् । अब यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि बढेको तलबमा मात्रै साउदीका लागि मागपत्र प्रमाणिकरण हुनेछ ।
कुवेतमा साहुको छोराद्वारा छुरी हानेर पेशलमायाको हत्या (सक्दो शेयर गरी यो सन्देश परिवारसम्म पुराउन सहयोग गरौं)
कुवेतमा घरेलु महिला कामदारको रुपमा रोजगारीका लागि पुगेकी सुनसरीकी ४५ बर्षीया पेशलमाया राईको कुवेती साहुको छोराले छुरी प्रहार गरी हत्या गरेको छ । राहदानी नं. ०६५५६१९६ र नेपाली नागरिकता नं. २४८०९ (सुनसरी) रहेकी पेशलमाया राईको ३ अगस्ट २०१८, शुक्रबारका दिन आफूले काम गर्ने घरकै साहुका छोराले छुरा प्रहार गरी हत्या भएको बताइएको छ ।
छुरा प्रहार गर्ने साहुका छोरा कुवेती नागरिक भने जेलमा रहेको बताइएको छ । त्यहाँको प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
नेपाली दूताबास कुवेतका द्वितीय सचिव ज्ञानबहादुर मगरले मृतकको आफन्त अनि घरपरिवारसँग सम्पर्क हुन नसक्दा शव पठाउन र अन्य कानुनी प्रक्रिया शुरु गर्न नसकिएको बताए । मगरले भने, “आफ्नै कुवेती मालिकको छोराबाट छुरी प्रहार गरी पेशलमाया राईको हत्या भएको प्रमाणित भइसकेको छ र हत्या गर्ने मालिकको छोरो हाल कुवेतको जेलमा छन् ।”
मृतक पेशलमाया राईको परिवार वा आफन्तहरु कसैसँग पनि सम्पर्क हुन नसकेको हुँदा शव पठाउने तथा मृतकको परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति लगायत अन्य कानुनी प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन ।”
द्वितीय सचिव मगरले यसै समाचारमार्फत मृतक पेशलमाया राईको परिवार वा आफन्तहरुलाई नेपाली दूतावास कुवेतको सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेका छन् ।
मृतक पेशलमाया राई विस २०७० भदौ ४ गते व्यक्तिगत भिसामा कुवेतका लागि घरेलु महिला कामदारमा श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत आएको रेकर्डमा देखिएको छ ।
राहदानी जारी मिति २७ जुन, २०१३ (सुनसरी) र जन्ममिति १९७३ नोभेम्बेर १२ रहेकी पेशलमाया राईलाई चिन्नु हुनेले उनको परिवार वा आफन्तहरुसम्म यो सूचना प्रवाह गरिदिन दूतावासले अनुरोध गरेको छ । नेपाली दूतावास कुवेतको हटलाइन नं. ००९६५–९८८६९१२१ मा सम्पर्क गरिदिनु हुन नेपाली दूतावास कुवेतले आग्रह गरेको छ ।